Otú Ị Ga-esi Gwa Nwa Gị Banyere Ozi Iberiibe | Ihe Ndị Ga-Enyere Ezinụlọ Aka
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Bengali Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Mexican Sign Language Myanmar Nepali Norwegian Pangasinan Peruvian Sign Language Polish Portuguese Romanian Russian Russian Sign Language Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Xhosa Zulu
IHE NA-ECHEGBU GỊ
Ị nụla na ndị na-eto eto na-eji ekwentị ezigara ibe ha foto ndị gba ọtọ. I nwere ike ịna-eche ma nwa gị ò so eme ụdị ihe a.
O nwere ike ịbụ na ị maghị otú ị ga-esi gwa nwa gị banyere ya. Tupu anyị ekwuwe otú unu ga-esi ekwu banyere ya, ka anyị kwugodị ihe mere ụfọdụ ndị na-eto eto ji ezigara ibe ha ụdị ozi ahụ na ihe mere o ji gbasa gị. *
IHE MERE HA JI EME YA
Ụfọdụ ụmụ okorobịa na-eme o nwee nwa agbọghọ ha na-achụ, ha ana-ezigara ya ozi iberiibe. Ụmụ agbọghọ na-emekwa otu ihe ahụ.
Oge ụfọdụ, nwa okorobịa nwere ike ịmanye nwa agbọghọ ọ na-achụ ka o zitere ya foto ya ebe ọ gba ọtọ.
Mgbe ụfọdụ, nwa okorobịa nwere ike izigara ndị enyi ya foto nwa agbọghọ gba ọtọ iji mee ha obi ụtọ. O nwekwara ike izigara ha ya ma ya na nwa agbọghọ ahụ tisaa iji menye ya ihere.
Ihe sọkwara ya ya bụrụ ya mere ha ji eziga ụdị ozi ahụ, ọ bụrụhaala na onye na-eto eto nwere ekwentị, o nwere ike ịba ná nsogbu. Otu akwụkwọ kwuru na naanị otu ihe mmadụ pịrị n’ekwentị nwere ike ime ihe ndị mmadụ na-agaghị echefu echefu.
Ọtụtụ ndị amaghị na ha zipụhaala foto ọ bụla, ndị mmadụ nweziri ike iji ya mee ihe dị ha mma. Otu akwụkwọ akụkọ kwuru na otu nwa agbọghọ dị afọ iri na asatọ gburu onwe ya n’Amerịka. Ihe mere o ji gbuo onwe ya bụ na enyi ya nwoke zigaara ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ha foto ya ebe ọ gba ọtọ. Foto ahụ bụ foto o ji ekwentị ya zigara enyi ya nwoke ahụ. Ụmụ akwụkwọ ha zigakwaara ndị ọzọ foto ahụ, ụfọdụ jikwa ya mee ya akaje.
N’obodo ụfọdụ, ndị ọchịchị na-ejide ụmụaka ndị na-ezigara ibe ha foto iberiibe. E nwere ike ijide nne na nna ha ma ọ bụrụ na aha ha dị n’ekwentị ahụ. E nwekwara ike ijide ha ma ọ bụrụ na ha emeghị ihe nwa ha ga-eji kwụsị iziga ụdị ozi ahụ.
Gwa ya ihe ị chọrọ ka ọ na-eme. Nke bụ́ eziokwu bụ na ị gaghị enwe ike ịma ihe niile nwa gị ji ekwentị ya eme. Ma, i nwere ike ime ka ọ ghọta ihe ndị ị na-agaghị achọ ka o jiri ya na-eme, gwakwa ya ihe ị ga-eme ya ma o mee ihe ndị ahụ. Cheta na i kwesịrị ịma ihe ọ bụla nwa gị ji ekwentị ya eme.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Efesọs 6:1.
Mee ka ọ ghọta nsogbu ọ ga-akpatara ya. I nwere ike ịsị ya: “E nwere ụdị ozi iberiibe dị iche iche ndị na-eto eto na-ezigara ibe ha. Olee ụdị ihe i chere so n’ozi iberiibe?” “Olee ụdị foto i chere na ọ dịghị mma?” “N’obodo ụfọdụ, ndị ọchịchị na-ejide ụmụaka ndị na-ezigara ibe ha foto iberiibe. Ì chere na ihe ahụ ndị ọchịchị na-eme dị njọ?” “Gịnị mere na iziga ụdị ozi iberiibe ahụ adịghị mma?” Gee ya ntị nke ọma ka ị nụ ihe ọ ga-aza. Nyekwara ya aka ka ọ ghọta nsogbu ụdị ozi ahụ nwere ike ịkpatara ma yanwa ma gịnwa.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Hibru 5:14.
Ozi i ji ekwentị zipụ nwere ike ịkpatara gị nsogbu
Mee ihe atụ ga-eme ka ọ ghọtakwuo ihe ị na-ekwu. I nwere ike ịgwa nwa gị, sị: “Ka e were ya na nwa okorobịa na-amanye nwa agbọghọ ka o zitere ya foto ebe ọ gba ọtọ. Gịnị ka i chere nwa agbọghọ ahụ kwesịrị ime? Ò kwesịrị izigara ya foto ahụ ka ha ghara ise okwu? Ka ọ̀ ga-ajụ, ma ya na ya ana-akpakwarị? Ka hà ga-akwụsị ịkpa? Ka ò kwesịrị ịgwa ya nne ya ma ọ bụ nna ya?” Nyere ya aka ka o chebara ihe a echiche nke ọma.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Galeshia 6:7.
Mee ka ọ mata na o kwesịrị ịna-akpa àgwà ọma. Jụọ ya ajụjụ ndị dị ka: Gịnị mere o ji dị mma ka mmadụ na-akpa àgwà ọma? Olee àgwà ị chọrọ ka e jiri mara gị? Olee otú obi ga-adị gị ma i zigara ndị ọzọ foto nwata ibe gị iji menye ya ihere? Obi ọ̀ ga-adị gị mma ma ị na-akpa àgwà ọma? Gbalịa nyere nwa gị aka ka o nwee ezi akọnuche.—1 Pita 3:16.
Na-akpa àgwà ọma. Baịbụl kwuru na onye ma ihe anaghị etinye aka n’omume rụrụ arụ, ọ naghịkwa eme ihu abụọ. (Jems 3:17) Otú i si akpa àgwà ọ̀ na-egosi na ị ma ihe? Otu akwụkwọ kwuru na ndị nne na nna ekwesịghị ịna-ekiri foto ndị gba ọtọ ka ụmụ ha nwee ike ịmụta àgwà ọma n’aka ha.
^ para. 5 Ị chọọ ịgụkwu banyere ya, gaa n’adres bụ́ pịa IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI, pịa ebe e dere NDỊ NA-ETO ETO, ị ga-ahụ isiokwu bụ́ “Gịnị Ka M Kwesịrị Ịma Banyere Ozi Iberiibe?”
AMAOKWU BAỊBỤL NDỊ UNU GA-ECHEBARA ECHICHE
“Ndị bụ́ ụmụ, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi.”—Ndị Efesọs 6:1.
‘Ndị tozuru okè na-azụ ikike nghọta ha azụ iji mata ihe dị iche n’ihe ziri ezi na ihe na-ezighị ezi.’—Ndị Hibru 5:14.
“Mkpụrụ ọ bụla mmadụ na-agha, ọ bụ ya ka ọ ga-aghọrọkwa.”—Ndị Galeshia 6:7.
Ọ bụrụ na ọ ga-anyị gị arọ n’ọnụ ịgwa nwa gị banyere iji ekwentị ezipụ ozi iberiibe, i nwere ike ime ihe ndị a:
Buru ụzọ gwa ya ka ọ gwa gị ihe ụfọdụ ndị na-eto eto na-eme. Sịzie ya na ị nụrụ na e nwere ndị na-eji ekwentị ezigara ibe ha foto ndị gba ọtọ. Jụọ ya ma è nwere onye ọ ma na-eme ụdị ihe ahụ.
Jụọ ya ihe o chere banyere ihe ndị na-eto eto ibe ya na-eme. I nwere ike ịjụ ya, sị: “Ì chere na ndị mmadụ ghọtara na izigara ibe ha foto iberiibe ga-akpatara ha nsogbu?”
Gị na ya kwuzie ihe o nwere ike ime. Sị ya: “Ka anyị kwuo ihe i kwesịrị ime ma e zitere gị ụdị ozi ahụ.”
Aro: I nwere ike iji ihe ị gụtara n’akwụkwọ akụkọ kọwaara ya ihe i bu n’uche. Dị ka ihe atụ, i nwere ike ịsị ya: “Agụrụ m banyere nwa agbọghọ ụmụ akwụkwọ ibe ya zigaara ndị ọzọ foto ya ebe ọ gba ọtọ. Ì chere na ụdị ihe ahụ na-eme eme?”